Virgen del Carmen သို့ဆုတောင်းခြင်း ? ခက်ခဲသောကိစ္စများအတွက်အကာအကွယ်ပေးခြင်း
အပျိုကညာမှဆုတောင်းပဌနာ Carmen မှ၀ ါကျနှင့်ဖြေရှင်း။ မရနိုင်သောခက်ခဲသောအခြေအနေမရှိပါ ကရမအပျိုကညာ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်တစ်စုံတစ်ရာသောအခက်အခဲများကိုမည်သည့်အချိန်တွင်နေထိုင်ရမည်ကိုမသိသောကြောင့်ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်းသည်ကောင်းမွန်သောကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ခံယူချက်ဆိုင်ရာမဟာဗျူဟာသည်ကျွန်ုပ်တို့နေ့စဉ်နှင့်အမျှအကြိမ်များစွာရင်ဆိုင်ရန်လိုအပ်သည်။
ဤအပျိုကညာကိုအပူတပြင်းစဉ်းစားသည်။ အကြောင်းမှာအံ့ဖွယ်အမှုများ ဖြစ်၍ ဆုတောင်းခြင်းပြီးနောက်မိနစ်အနည်းငယ်အကြာတွင်အဖြေများကိုတွေ့မြင်ရခြင်းကြောင့်ဖြစ်သည်။
ငါတို့ကိုနားလည်ပြီးမည်သည့်အခြေအနေမျိုးတွင်မဆိုကျွန်ုပ်တို့ကိုထောက်ခံနိုင်သူတစ် ဦး ရှိသည်ကောင်းကင်၌ရှိကြောင်းကိုသိခြင်းကကျွန်ုပ်တို့အားငြိမ်သက်မှုနှင့်ယုံကြည်မှုအပြည့်ဖြင့်အရာအားလုံးအဆင်ပြေလိမ့်မည်။
1 Virgen del Carmen အတွက်ဆုတောင်းခြင်း Virgen del Carmen ကားမည်သူနည်း။
1.1 ခက်ခဲသောကိစ္စရပ်များအတွက် Virgen del Carmen ထံဆုတောင်းပါ
1.2 ဉာဏ်အလင်းနှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဘို့အ Virgen del Carmen ၏ဆုတောင်းချက်
1.4 သူမ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာရောက်ရှိဖို့ Virgen del Carmen ဆုတောင်းပဌနာ
Virgen del Carmen အတွက်ဆုတောင်းခြင်း Virgen del Carmen ကားမည်သူနည်း။
အဖြစ်လူသိများ ကာမဲန်၏ကျွန်ုပ်တို့၏သမ္မတကတော်၎င်းသည်အပျိုစင်မာရိအားထောက်ခံအားပေးမှုတစ်ခုဖြစ်သည်။ ဥယျာဉ်ဟုအဓိပ္ပာယ်ရသောIsraelသရေလနိုင်ငံရှိကရမေလတောင်ပေါ်မှဆင်းသက်လာသည်။
အချို့သောနိုင်ငံများတွင်သူမသည်ပင်လယ်၏နာယကသူတော်စင်အဖြစ်သတ်မှတ်ခံရပြီးအခြားနိုင်ငံများတွင်မူစပိန်နိုင်ငံကဲ့သို့ပင်သူမသည်စပိန် Armada ၏နာယကသူတော်စင်အဖြစ်သတ်မှတ်ခံရသည်။ ထိုအပျိုကညာကို ၁၂၅၁ ခုနှစ်တွင်စိန့်ရှိမွန်စတော့အိတ်အားထင်ရှားခဲ့သည်။
ထိုတွေ့ဆုံမှု၌ထိုသူအား scapular နှင့်သူ၏အလေ့အထများ၊ ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းရှိကရမေလတောင်၏မာရီယန်ယဉ်ကျေးမှုဟုလူသိများသည့်သင်္ကေတနှစ်ခုပေးခဲ့သည်။
အပျိုစင်မာရိကိုကိုးကွယ်ခြင်းသည်ကက်သလစ်ဘုရားရှိခိုးကျောင်း၏ဓလေ့ဖြစ်သည်။ သူသည်ဤကမ္ဘာမြေပေါ်တွင်လူသားတစ် ဦး အနေနှင့်သခင်ယေရှုခရစ်ကြွလာခြင်းတွင်အပျိုကညာ၏အရေးပါမှုကိုမီးမောင်းထိုးပြသည်။
ခက်ခဲသောကိစ္စရပ်များအတွက် Virgen del Carmen ထံဆုတောင်းပါ
မိခင်တစ် ဦး အနေနှင့်အပျိုစင်မာရိသည်အန္တရာယ်ရှိသောအခြေအနေ၌ရှိနေသောချစ်ရသူတစ် ဦး အတွက်စိတ်သောကရောက်ခြင်းကိုသိသည်။
၀ ိညာဉ်ရေးရာဖြင့်ယုံကြည်ခြင်းဖြင့်ပြုလုပ်သောဆုတောင်းချက်များသည်ထိရောက်မှုရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့မျှော်လင့်ထားသည့်အံ့ဖွယ်အမှုသည်ကျွန်ုပ်တို့အားမည်မျှခက်ခဲစေနိုင်သော်လည်းကျွန်ုပ်တို့မဖြစ်နိုင်ပါဟုကျွန်ုပ်တို့မမျှော်လင့်နိုင်ပါကကျွန်ုပ်တို့ဆုတောင်းသောအခါ၎င်းကိုသတိရပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သဘာဝနည်းလမ်းဖြင့်သာရရှိနိုင်သည့်အရာတစ်စုံတစ်ခုကိုတောင်းဆိုနေသည်။
ဉာဏ်အလင်းနှင့်ကာကွယ်စောင့်ရှောက်ရေးအဘို့အ Virgen del Carmen ၏ဆုတောင်းချက်
မင်းရဲ့အကူအညီမပါဘဲလမ်းလွဲသွားနိုင်တဲ့ဒီဘ ၀ ရဲ့အမှောင်ထုလမ်းကြောင်းများမှတစ်ဆင့်ကျွန်ုပ်ကိုအမြဲတမ်းဉာဏ်အလင်းပေးဖို့မင်းရဲ့ ၀ တ်စုံ ၀ တ်စုံကိုယနေ့ဆုတောင်းပါ၏။
ကျွန်ုပ်၏အပြစ်များအားလုံးကိုခွင့်လွှတ်ပါကျွန်ုပ်ကိုများစွာ ၀ မ်းမြောက်မိပြီးသင့်ကိုတစ်နေ့ပြီးတစ်နေ့လေးစားပါ၏။ စိတ်ရှုပ်ထွေးစရာအချိန်လေးမှာငါ့ကိုမထားခဲ့ပါနဲ့နင့်အကူအညီမပါဘဲငါဆိုးရွားတဲ့သိုးပဲဖြစ်လိမ့်မယ်။
ကျွန်ုပ်တို့အတွက်၊ မိသားစုဝင်တစ် ဦး သို့မဟုတ်အထူးခင်မင်ရင်းနှီးမှုအတွက်ကျွန်ုပ်တို့အတွက်အလင်းရောင်နှင့်ကာကွယ်မှုတောင်းခံခြင်းသည်အသစ်အဆန်းမဟုတ်ပါ။
ကမ္ဘာပေါ်တွင်မကောင်းမှုများမြင့်တက်နေပုံရပြီးကျွန်ုပ်တို့အားကူညီနိုင်သောအခြားသန့်ရှင်းသူများထံမှဆုတောင်းခြင်းကိုတောင်းခံခြင်းသည်ကမ္ဘာပေါ်တွင်လုံခြုံမှုမရှိခြင်း (သို့) အားနည်းချက်ရှိခြင်းသည်ပုံမှန်ဖြစ်သည်။
အိုး Carmen ၏သန့်ရှင်းသောဘုရားသခင့!
ကျွန်ုပ်တို့၏ရိုးရှင်းသော်လည်း၊ နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းအဓိပ္ပာယ်ရှိသော၊ ကျေးဇူးတင်ပါ၊ လက်ခံပါ။ သင့်အတွက်ထိုက်တန်သောအရာနှင့်ကိုယ်တော်၏ကရုဏာတော်ကိုကျွန်ုပ်တို့ဘာမျှမပေးနိုင်ပါ။
ကျွန်ုပ်တို့၏သားတော်၊ ကျွန်ုပ်တို့၏သခင်၏သားတော်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုနှင့်သင်၏ချိုမြိန်သောဆည်းကပ်ဝတ်ပြုမှုဖြန့်ဖြူးရာတွင်အသုံးပြုရန်ကျွန်ုပ်တို့နှလုံးသားများကို၎င်း၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာအားလုံးနှင့်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘဝတစ်လျှောက်လုံးကမ်းလှမ်းသည်။
ဘုရားသခင့် ၀ ိညာဉ်တော်နှင့်အတူယုံကြည်ခြင်းနှင့်ညီညွတ်သောငါတို့၏ညီအစ်ကိုများသည်သန့်ရှင်းသောဘုရားဝတ်ဆင်ခြင်းဝတ်ဆင်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့အားအသက်ရှင်ခြင်း၊ ပြန်လည်ဆက်ဆံခြင်း၊ တန်ဖိုးထားလေးမြတ်ခြင်း၊ ကျေးဇူးတင်ခြင်းနှင့်ငါတို့အားလုံးသည်သင်၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာနှင့်ဆည်းကပ်ဝတ်ပြုမှုတွင်အသက်ရှင်ပြီးသေဆုံးနိုင်သည်ကိုရှာဖွေခြင်းဖြစ်သည်။
သူမ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာရောက်ရှိဖို့ Virgen del Carmen ဆုတောင်းပဌနာ
သင်သည်အမြင့်မြတ်ဆုံးသောသတ္တဝါ၊ အမြင့်မြတ်ဆုံး၊ စင်ကြယ်ဆုံး၊ အလှဆုံးနှင့်အသန့်ရှင်းဆုံးသောသူဖြစ်သည်။
အိုး၊ လူတိုင်းကငါ့အကြောင်း၊ မေမေနဲ့အမေ၊ မင်းကိုထိုက်သင့်တဲ့လူတိုင်းကမင်းကိုချစ်မယ်ဆိုရင်!
ကျွန်ုပ်ချစ်မြတ်နိုးရဆုံးမိဖုရား၊ စိတ်ဆင်းရဲသူ၊ ကျွန်ုပ်သည်လည်းသင့်ကိုချစ်သော်လည်းသင်ရထိုက်သောအရာများနှင့်နှိုင်းယှဉ်လျှင်သင်အနည်းငယ်သာချစ်သည်။ ထို့ကြောင့်သင်တို့ကိုချစ်မြတ်နိုးရန်နှင့် ပို၍ နူးညံ့သောချစ်ခြင်းမေတ္တာကိုငါလိုချင်သည်။ သင့်ကိုချစ်မြတ်နိုးခြင်းနှင့်သင်၏သန့်ရှင်းသောဘုရားရှိခိုးကျောင်းကိုသယ်ဆောင်ခြင်းသည်ဘုန်းအသရေအတွက်ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားသည့်အမှတ်အသားဖြစ်ပြီးဘုရားသခင်အားသာပေးသနားသောကျေးဇူးတော်ဖြစ်သောကြောင့်ဤအရာသည်ကျွန်ုပ်ထံရောက်ရှိရန်လိုအပ်ပါလိမ့်မည်။ ထိရောက်စွာကယ်တင်ချင်သောသူတို့အား။
သို့ဖြစ်၍ သင်သည်ဘုရားသခင်ထံမှအရာရာကိုရောက်ရှိပြီးကျွန်ုပ်ကိုဤကျေးဇူးကိုယူပါ။ ကျွန်ုပ်ပြသထားသောချစ်ခင်မှုအရကျွန်ုပ်၏နှလုံးသားသည်သင်၏မေတ္တာတော်၌လန်းဆန်းစေပါစေ။ မင်းကိုအမေ၏နူးညံ့သောချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြင့်ကျွန်ုပ်ကိုချစ်သောကြောင့်၊ ကျွန်ုပ်သည်စစ်မှန်သောသားတစ်ယောက်အနေဖြင့်ကျွန်ုပ်ကိုချစ်သောကြောင့်၊ မြေကြီးပေါ်ရှိချစ်ခြင်းမေတ္တာအတွက်သင်နှင့်အတူပါ ၀ င်ပါကနောင်မှသင်နှင့်ကွဲသွားမည်မဟုတ်ပါ။
သူမ၏ချစ်ခြင်းမေတ္တာရောက်ရှိရန် Virgen del Carmen ထံဤဆုတောင်းခြင်းသည်အလွန်ပြင်းထန်သည်။
ချစ်ခြင်းမေတ္တာစစ်မှန်ခြင်းကိုရယူခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ဘ ၀ တွင်အမြဲရှိနေသောအထူးသဖြင့်အသက်အရွယ်တစ်ခုပြီးပြီသို့မဟုတ်အချိန်ကာလတစ်ခုတွင်စုံတွဲတစ်တွဲအဖြစ်နေထိုင်ပြီးနောက်သင်တစ်ကိုယ်ရေဘဝတွင်ရှိနေသည့်အခါဖြစ်သည်။
ထိုနည်းတူစွာပင်ဤဆုတောင်းခြင်းသည်မိတ်ဖက်ပြုခြင်းသည်အချို့သောအခက်အခဲအတိုင်းအတာကိုကိုယ်စားပြုသောအခါသို့မဟုတ်တစ်စုံတစ် ဦး ကိုချစ်ခြင်းမေတ္တာလွှမ်းမိုးရန်သို့မဟုတ်အောင်နိုင်ရန်အလွန်ခက်ခဲသောအခြေအနေများတွင်ထိရောက်စွာဆုတောင်းခြင်းသည်သူတို့၏မေတ္တာကိုရရှိရန်သို့မဟုတ်ရောက်ရှိရန်ဖြစ်သည်။
၀ ိညာဉ်ရေးရာလက်နက်များသည်အစွမ်းထက်ကြောင်း၊ ၎င်းသည်မည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ကိုကျွန်ုပ်တို့မသိပါက၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့လျစ်လျူရှု။ မရပါ။ ၎င်းကိုကျွန်ုပ်တို့ယုံကြည်သောအချိန်၌၎င်းဆုတောင်းခြင်းအားအစွမ်းထက်စွာဖြေကြားလိမ့်မည်ဟုယုံကြည်စိတ်ချစွာဖြင့်အသုံးပြုနိုင်သည်။
သူတို့အားလုံးဟာကောင်းတယ်၊ အကူအညီရတယ်၊ axulio လိုချင်တယ်၊ ဒါကတစ်ကြိမ်ထက်မကမှားတယ်။